Ajọ Ifufe Maria rutere ọkwa kachasị elu wee mebie agwaetiti Dominica | Network Meteorology
Enweghị nkwado. Oge ifufe nke Atlantic afọ a na-arụsi ọrụ ike. Ọzọkwa. Enweghị oge dị mkpa iji nwetaghachi ike mgbe ụzọ Irma gasịrị, ugbu a, Maria bu onye mbu. Ọbụghị naanị n'ihi na ọ na-eto n'ike n'ike (ọ gafere iru otu 1 ruo 5 n'ihe na-erughị awa 24), kamakwa n'ihi na ọ na-eyi egwu ibibi mbibi dị ka onye bu ya ụzọ.
Ọzọkwa, agwaetiti nke Oké Osimiri Caribbean bụ anya oké ifufe. N'ezie, ugboro ugboro, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ agwaetiti nile nke Caribbean ka ha na-eche Maria.
El Ajọ ifufe Maria, ya na ikuku ifufe kachasị elu nke 260km / awa, dakwasịrị agwaetiti Dominica na Mọnde, nke nwere ndị bi na 75.000, bụ ndị funahụrụ ihe niile, dị ka Prime Minister Roosevelt Skerrit kwuru na ya Akaụntụ Facebook. N'okwu ya, "anyị tufuru ihe niile ego nwere ike ịzụta ma gbanwee."
Dabere na amụma ndị a, ga-aga Puerto Rico na British Virgin Islands, ebe ọ ga-abata n’abalị Tuesday na Wednesday. A naghị atụ anya ịbata United States, dịka Irma mere.
Foto - National Hurricane Center (CNH)
Tupu Maria erute, ndị ọchịchị gwara ndị bi na ha ka ha nọrọ n'ụlọ ha, ewezuga ndị bi na mpaghara ndị na-adịghị ike, ndị ga-akwaga na ebe nchekwa. Na Dominican Republic, e nyere iwu ịchụpụ mgbochi na Mọnde a, ebe ọ bụ na ajọ ifufe a na-atụ anya iru mba ahụ echi, Wenesde.
Ma Virgin Islands na Puerto Rico tara ahụhụ site na Irma ngafe ụbọchị ole na ole gara aga. A ifufe nke hapụrụ nnukwu ihe ọghọm ma gbuo ndụ mmadụ 82. Na nwute, oke ifufe Hurricane Maria dịkwa oke. Site ebe a, anyị chọrọ zipu otutu obi ike na ume maka ndị niile nọ na Caribbean.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ajọ Ifufe » Ajọ ifufe Maria rutere ọkwa kachasị elu wee bibie agwaetiti Dominica
Ka anyị kwuo banyere geysers